Wararka Maanta: Jimco, Sept 21, 2012-Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in Qaraxyadii Muqdisho aysan dowladda ka leexinayn hadafkeeda Siyaasadeed
Shir jaraa'id oo uu madaxweynuhu ku qabtay madaxtooyada ayuu ku sheegay in qaraxyadaas aysan ka leexin doonin dowladda hadafka ay ku doonayso inay dalka ku gaarsiiso nabad iyo horumar.
"In dad shaah cabaya oo sheekeysanaya la dilo waa arrin aad looga naxo oo dambi weyn ah, waxaana shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa dadkii weerarkaas ku dhintay," ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweynaha oo sii hadlaya ayaa yiri: "Qaraxyadan maahan kuwo ka hor-joogsan kara ummaddan inay nabad hesho, dadka la dilayo ama la dhaawacayana waa kuwo aan waxba galabsan,"
Sidoo kale, madaxweynuhu wuxuu sheegay in dadkii ku dhaawacmay uu u rajeynayo caafimaad deg-deg ah, intii ku dhimatayna Janno, isagoo sheegay in ficilladan oo kale aysan dowladda ka leexin doonin hadfkeedii ahaa inay dalkan ku hoggaamiso nabad iyo dowladnimo.
"Waxaan u arkaa ragga qaraxyadaas sameynaya kuwo uu ka dhammaaday macaamil kasta oo wanaagsan. Siyaasadda dalkana waxba kama bedelayaan qaraxyadan, balse iyaga uun baa ku dhammaanaya dad shacab ahna way dhammeynayaan," ayuu yiri madaxweynuhu.
Ma jirto cid uu si gaar ah ugu eedeeyay weerarkan, iyadoo weerarkan ay geysteen rag waxyaabaha qarxa isku soo xiray, kuwaasoo aan weli la ogaan cid ay ka tirsan yihiin in hadafkii ay ka lahaayeen weerarkan.